Posted on February 15, 2016 by Qeerroo
Yomif Tola on February 15, 2016 at 4:17 pm said:
Magalaa Buraayyuu garuu guyyaa hardhaa loltuu fi basaaton wayyane alaala/qarree dhabbachuun akka barattoon akka mana barumsaa seenan dirqisisaa jiru.
Basasoni qarshiin bitaman ucuu civili ofachuun sochii hundumaa to’achuuf yaala yoo jitatan iyyuu ummanis eenyu maal akka hojechaa jiru adda baafachaa jira. Miseensoni OPDO tokko tokkos yoo jarri mo’atee aangoo qabate lafaa irraa ni dhumtuu kanaaf hanga dhumaatti sochii ummataa kana dura dhaabbadha falmaa jedhani diinni isaanitti fayyadumu kun duukaa bu’un waanta hundumaa akka raawwatan waligai’ii yeroin yeroon taasisuun to’achaa akka jiran mul’achaa jira. Miseeson OPDO warri humtuu hingalleef meeshaa diinaa ta’uun qabsoo ummataa dura dhabbachaa jiru. Dhimmi kun adeemssa hundumaa caala kan xiyyeffannoon itti kennamu kan qabuudha. Diinni kan ittiin iccitii ummata argatee sochii tokko tokkoon ummani taasisuu karaa ergamitoota kanaa waan ta’eef hanga falli guddaan/malli cimaan karaa kanaan umamee furmaati yoo itti hinkennamine rakkina,gufuu fi dadhabina guddaa nugaafata. Gaafa tarkkaanffiin xiqqaallee ta’u diinaa fi jala deemtuu irratti ishii irratti fudhatame amantanis dhiiftan guyyaan tokko keessatti diinni baqatee biyyaa baddi. Achumaa as-dhufa ummatuma keenyaa keessaa baateti ergamitooni akka ummani keenya garboomu kan taasifame; ammas dhibbeedhuma/adeemsuma kanatu ummani kun akka garbummaa jalatti hafu taasisaa jira!!!!!!!,kanaaf isa dhumaa kara deemtuutti kan karaa, iccitii fi garaa ummata kanaa agarsisan hudeedhaa hincinnetti qabsoon bilisummaa ni dheerata. Anis muuxannoo kootiif umurii koo keessatti akka rakkina guddaa rakkoo oromoo mudatan keessaa isa kana ta’uu isaa waanta sirritti hubadheefan dhimma kana irratti xiyyeffadhee yaada kunnuu kanaan barbaade.
Kunoo yeroo ammaa manaa fi gandoota jiraattotaa agarsisuun akka diinni gara jabinaan ummata reebu, ajjeessuu,madeessu,iddoo buutee namaa kan dhabasiiftu,sababa lukeeen diinaa waan hundumaa jaratti agarsiifituu fi ofiifis hanga dandeesutti ummata halkanii fi guyyaa ummata dararaa jirti, garuu ummannis deebii fii tarkkaaffiwwan cimaa irratti fudhachaa yoo jiraate iyyuu qaama biraatiin toftaanis ta’ee humnaan deggeramumalee itti fufiissa dhabuun dadhabbii fida!!